Archive du 20170307
Andry Rajoelina Tsy ho kandida indray ?
Tsy arakaraka ny teny nataon�i Andry Rajoelina ny 12 febroary lasa teo ny fihetsiny amin�izao fotoana izao.
Hitsena loza !
Manao ahoana ianareo any ry Jean fa izahay aty efa tena mihoro-koditra ! Vita iny haintany migaingaina fa ho avy kosa ity ny ranobe mangeniheny sy ny rivotra tsy hifankahitana.
Fitsaram-bahoaka Mandamin-dresaka ny minisitry ny fiarovana
Nifoha tamin�ny torimasony ny minisitry ny fiarovam-pirenena Jeneraly Beni Xavier Rasolofonirina, rehefa tsy hita sy tsy nandrenesam-peo manoloana ny raharaha mafana eto amin�ny firenena amin�izao fotoana izao.
Rivodoza � Enawo � Tena mahery vaika
Anio talata 7 martsa eo anelanelan�ny amin�ny 9ora maraina ka hatramin�ny amin�ny 12 ora antoandro no mety hiditra tanteraka an-tanety ny rivodoza �Enawo�, raha ny tomban�ny sampandraharaha mpamantatra ny toetr�andro, ka eo anelanelan�Antalaha sy Cap Masoala no hidirany.
Andron�ny vehivavy Anaty rivodoza, ahiana ny fandriampahalemana
Sambany indray no ao anaty vanim-potoanan�ny rivodoza no hankalazana ny andron�ny 8 martsa.
Onitiana Realy � Tsy misy faneriterena ny fetin�ny 8 martsa �
Natomboka omaly ny hetsika fanamarihana sy fankalazana ny andron�ny vehivavy 8 martsa amin�ity taona ity.Nisy ny fampahafantarana teny amin�ny hotely Carlton azy 18 mirahavavy misolotena ny faritra 22 amin�ilay fifaninanana
Fiatrehana ny Rivodoza Efa vonona ny BNGRC
Hiditra an-tanety anio talata 7 martsa amin�ny 12 ora antoandro ilay rivodoza Enawo. Eo anelanelan�ny distrikan�Antalaha sy Cap Masoala no hiaingany, hamakivaky eto afovoan-tany rahampitso alarobia 8 martsa sy ny alakamisy 9 martsa.
Minisitry ny fiarovana � Arovy ny vahoaka ! �
Nivoaka tamin�ny fahanginany ary naneho ny heviny mikasika ny fahitany ny raharaha mikasika ny fitsaram-bahoaka niseho tato ho ato
Efa dodona !
Ekena fa tsy mifanaraka amin�ny toetrandro intsony ny rafi-pitantanana misy eto amintsika ankehitriny.
Mikorontana ny ngeza !
Mikorontana tanteraka ny tontolo politika any Frantsa. Fifidianana no antony. Samy mizarazara na ny hery an-kavia misy ny sosialista antokon�ny filoha Hollande na ny hery an-kavanana antokon�ny Les Republicains tarihan�i Nicolas Sarkozy ary nanolotra an�Atoa Fillon ho kandida amin�ny fifidianana filoham-pirenena.
Fandravana trano eny Ambohijanaka Manomboka mitroatra ny vahoaka
Mihamafana ilay raharaha fandravana trano ao anatin�ny kaominina Ambohijanaka amin�izao fotoana izao na dia vao manomboka maka ny hevitr�ireo mponina voakasika sy handravona izany aza ny Ben�ny tan�na Alain Ratsimbazafy sy ireo ekipany mialoha ny hifampiresahany mivantana amin�ny minisitera misahana ny tetikasan�ny filoham-pirenena.
Distrikan�i Morondava Mirongatra indray ny Androbe
Misy milaza fa Androbe, ao koa ny miteny hoe Ambalavelona. Raha ny fampitam-baovao dia mirongatra indray izao ireny karazan�aretina mampihetsiketsika hafahafa ireo ankizy mpianatra amin�ny ambaratonga fototra ireny ao amin�ny distrikitr�i Morondava ao.
Harem-pirenena very hatramin�ny 1960 Efa nahazoana helikoptera 100
500 hatramin�ny 750 tapitrisa dolara isan-taona ny harena an-dranomasina very eto Madagasikara, hoy ny filohan�ny Repoblika Rajaonarimampianina Hery.
� Gare routi�re � Andohatapenaka Naaton�ny kaominina ny asa
Tonga teny amin�ny tanimenabe Andohatapenaka omaly ny delegasionina avy ao amin�ny kaominina Antananarivo Renivohitra nijery ifotony ny zava-misy momba ilay fikasana hanorina �gare routi�re� na toby fiantsonan�ny taksibrosy sy toby fivarotan-tsolika.
Antsiranana Faha-25 taonan�ny IST-A
Natomboka tamin�ny fanompoam-pivavahana tao amin�ny kath�drale sy ny mosqu�e ao Antsiranana, ny zoma lasa teo ny fanamarihana ny faha-25 taona niorenan�ny IST-A na ny � Institut Sup�rieur de Technologie d�Antsiranana �.
Fampivoarana ny kolontsaina Hanampy ny tanora Malagasy ny LCC
Hanampy ny tanora Malagasy amin�ny fifehezana sy ny fampivoarana ny kolontsaina misy ny Centre de langue et de la culture ( LCC) naorin-dRaoelijaona Bodo,